Dowlada Federaalka oo Madaxwayanaha Puntland kadiiday in uu ka qaybgalo Caleemasaarka Axmed Madoobe. | Ogaden24
Dowlada Federaalka oo Madaxwayanaha Puntland kadiiday in uu ka qaybgalo Caleemasaarka Axmed Madoobe.
Dowlada Federaalka Soomaaliaya ayaa waxa ay wafdi u dirtay Puntland si oo xaliyo khilaafka ka dhexeeya Puntland iyo Dowlada dhaxe,waxaana la doonayay in Madaxwaynaha Puntland lagu qanciyo in uu ka baaqdo safarkiisa Kismaanyo.
Wasiiro ka socda Xukuumada Federaalka Soomaaliaya ayaa waxa ay shalay gaadheen magaalada Boosaaso ee Xarunta Ganacsiga Puntland.
Madaxwayne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa wafdigaani kulan kula qaatay madaxtooyada Magaalada Boosaaso waxayna ka dalbadeen in uu baajiyo safarka uu kaga qayb galayo Kismaanyo caleema saarka madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Jubaland oo dhawaan la filayo in uu ka dhaco Kismaanyo.
Dowlada Dhexe ayaa waxa ay madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaaliya Cadaadis ku saaraysaa in aysan ka qayb galin xaflada Caleemasaarka Axmed Madoobe,waxayna Garoonka muqdisho ka joojisay in ay ka dhoofaan dadkakismaanyo u socda.
Balse Madaxwaynaha maamulka Puntland Saciid Dani ayaa si cad uga soo horjeestay dalabka dowlada dhexe,waxaana uuku adkaystay in uu ka qayb galayo caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam madaxwaynaha Jubaland.